UNICK LACHEY WAHAMBA NGODOTI UKUZE AFUMANE IRINGI YOMTSHATO KAVANESSA - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato UNick Lachey waqhekeza inkunkuma ukuze afumane umsesane wakhe womtshato kaVanessa
UNick Lachey waqhekeza inkunkuma ukuze afumane umsesane wakhe womtshato kaVanessa
UNick noVanessa Lachey babhiyozela iminyaka emithandathu betshatile ngoMgqibelo, nge-15 kaJulayi (Shutterstock.com)
Ngu: Kelly Spears 06/26/2017 ngo-3: 30 PM
Thetha ngokuzinikela! Emva komfazi kaNick Lachey UVanessa ulahlekelwe ngumtshato wakhe, umyeni odlwengulayo wagqogqa inkunkuma ukuyifumana. Ngethamsanqa, wenjenjalo!
Olu luthando lokwenene emva kweminyaka emithandathu betshatile, imvumi yangaphambili ye-98 Degrees yabhala emva kokufumana ukukhanya. Ukumba amanabukeni amdaka kunye nenkunkuma ukuze ufumane umsesane womfazi wakho olahlekileyo !! #mpumelelo.
Abalandeli balandelwa ngamabali amava afanayo kunye nokudumisa okuninzi kwemvumi-eguqukileyo. Vala umnxeba, omnye umlandeli wabhala. Kulungile gcina uNick! Ngokuqinisekileyo ukuphumelela loo manqaku e-hubby.
Olu luthando lokwenene emva kweminyaka emithandathu betshatile …… #mpumelelo
Iposi ekwabelwana ngalo nguNick Lachey (@nicklachey) ngoJuni 24, 2017 nge-10: 28 ekuseni PDT
U-Lachey, oneminyaka engama-43 ubudala, wahlangana okokuqala nomdlali weqonga, eneminyaka engama-36, xa wayenenkwenkwezi kwividiyo yomculo ye-2006 yakhe ethi What Left of Me. Aba babini babandakanyeka ngo-Novemba ngo-2010 kwaye batshata ehlotyeni ngo-2011. Ngoku babelana ngabantwana abathathu, ICamden , 4, IBrooklyn , 2, kunye IPhoenix , ozojika omnye ngeyoMnga.
NgokukaLachey, enye into ephambili igcina umtshato wakhe uqinile. Luhlobo oluthile lokuncokola kodwa unxibelelwano yeyona nto inkulu kubudlelwane, uxelele Abantu Kungekudala emva kokuzalwa konyana wakhe omncinci. Kufuneka uthethe; kufuneka uvakalise izimvo zakho. Awufuni ukujonga ngasemva kwaye ucaphuke ungamva.
Kwaye ixesha elilodwa liseyona nto iphambili kwiibhandi zothando. Kubalulekile ukuba nichithe ixesha kunye, nobabini kuphela, uqaphele. Kodwa yonke into yosapho kubalulekile ukuba uchithe ixesha nosapho.
Ngelixa esi sibini sihlala sicwangcise ukuba nabantwana abathathu, ukubakho kweekiddos ezininzi yinto enokwenzeka. Mfutshane kwinkqubo yoqhaqho, ndiyaqikelela ukuba ihlala ikhetho, kodwa ndiye ndayeka ukuzama ukuqikelela ezi zinto, uLachey uxelele umag. Kuyabonakala ukuba kukho indlela yokwenza iintsana kwaye silungile kuyo, ke ngekhe wazi. Kodwa ndicinga ngoku, abathathu bavakalelwa njengenani elihle kakhulu.
Inye kuphela into eqinisekileyo: uLachey uyakuthanda ukuba ngutata! Yintoni epholileyo ngokwenene zonke zihluke ngeendlela zazo, kwaye awuboni ukuba kude kube ziqala ukuba zikhulile kwaye zifumane ubuntu babo, wagqiba kwi-mag. Zonke zahlukile kwaye zahlukile, kwaye uyazithanda izinto ezahlukeneyo ngazo ngeendlela ezahlukeneyo.
izimvo ezivulekileyo zasekhitshini
indlela yokuxelela ukuba iidayimani ziyinyani
Imibala yokuhlambela ye-2018